सुन्दर अनुहार बनाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी उपाय - Samudrapari.com
सुन्दर अनुहार बनाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी उपाय
१९३० पटक हेरिएको
काठमाडौं – मेवा खाँदा स्वादिष्ट मात्र होइन यसको समुचित उपयोगले हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा दिन्छ भन्ने कुरा नयाँ होइन । मेवाको प्रयोग छालासँग सम्बन्धित समस्या हटाउनका लागि सदियौँदेखि उपयोग गर्ने गरिएको छ ।
– मेवा हाम्रो स्वास्थ्यका लागि निकै फलदायी फल हो । मेवाको प्रयोगले अनुहारको सुन्दरता निखार्न सकिन्छ । यसले हाम्रो अनुहारको रंगलाई निखार्नुका साथसाथै छालाको समस्यालाई पनि हटाउँछ ।
– बढ्दो उमेरसँगै हाम्रो अनुहारमा पर्ने चाउरी र कालो धब्बा (डार्क सर्कल) आउन थाल्छ । मेवाको प्रयोगले यस्ता समस्याबाट केही हदसम्म मुक्ति पाउन सकिन्छ । मेवामा भएको भिटामिन सी, भिटामिन ई र एन्टी अक्सिडेन्टले अनुहारलाई चाउरिनबाट बचाउँछ ।
– अनुहारमा रहेको कालो दाग हटाउनका लागि मेवा र टमाटरको लेप बनाएर अनुहारमा लगाउन सकिन्छ । अनुहारमा लेप सुकेपछि त्यो प्रक्रिया फेरि तीन–चारपटक दोहोर्याउनु पर्छ, त्यसपछि चिसो पानीले मुख सफा गर्नुपर्छ ।
– मेवालाई स्क्रब बनाएर अनुहारमा लगायो भने अनुहारको दाग कम हुन्छ । यसले अनुहारको रङ पनि निखारेर गोरो बनाउँछ । मेवालाई म्यास गरेर अनुहारमा लगाउने र ५ मिनेटपछि सफा पानीले मुख सफा गर्नुपर्छ ।
– मेवाको फेस प्याक सबै उमेरका मानिसका लागि उपयोगी हुन्छ । आधा कप मेवा र दूधको लेप बनाएर अनुहारमा लगाएर केहीबेर सुख्खा राख्न दिएर सफा पानीले मुख सफा गर्नुपर्छ । यसले सन बर्नको समस्याबाट जोगाउँछ ।
हातको स्पर्शले पीडा घटाउँछ
धूमपानले आन्द्रा सुन्निने समस्या पनि
बच्चालाई पखालाबाट बचाउन ध्यान दिनुपर्ने कुरा
यसरी थाहा पाउनुस् मानसिक रोग
जानी राखौं यस्ता छन्, निरोगी रहने फर्मुला
शरीरलाई कसरी रोग प्रतिरोधात्मक बनाउने ?
दाँत ब्रस नगरे के हुन्छ ?
‘वायू प्रदुषणबाट १ करोड ७० लाख बालबालिकाको मस्तिष्कमा प्रत्यक्ष असर’